1. Aha aha / aha otutu:
Epoxy ntekwasa waya ntupu, epoxy mkpuchi ntupu, electrostatic mkpuchi ntupu, haịdrọlik nyo nchedo ntupu, haịdrọlik nyo ntupu, haịdrọlik nyo metal ntupu, iyo support ntupu, epoxy window ihuenyo ntupu.
2. Zuru ezu iwebata ngwaahịa:
Industrial epoxy ntekwasa wiremesh na-bụ-eji maka nkwado oyi akwa nke haịdrọlik / ikuku nzacha na mmiri nke ihe nzacha. A na-ejikarị ụgbụ epoxy eme ihe maka ihe mgbochi na-ezu ohi na ebe obibi dị elu. Nkpụzi ya bụ ịmịkọrọ mmanụ epoxy pụrụ iche n'elu ahịhịa waya a kpara site na mpempe akwụkwọ dị iche iche site na ịgba ọgwụ ntanye. Mgbe ụfọdụ okpomọkụ na oge, epoxy resin ntụ ntụ gbazee ma kpuchie ya n'elu mkpụrụ iji mepụta akwa Nchedo mkpuchi. Abụkarị mkpụrụ nwere igwe anaghị agba nchara, aluminum alloy ntupu, carbon ntupu ntupu. Epoxy resin ntụ ntụ gụnyere ime ụlọ ma ọ bụ ụdị dị n'èzí, nke enwere ike ịhazi ya ma mepụta dịka ihe ndị ahịa chọrọ (gụnyere agba ndị akọwapụtara).
3. Atụmatụ nke ngwaahịa:
Mgbe a gwọchara ya, a na-edozi ebe a na-akparịta ụka, ntupu na-edozi na square, na agha na weft na-anọchi anya, ọ dịghị mfe ịtọpụ ma gbanwee, a na-eme ka ikike nkwado ahụ dị ike; elu ntupu dị nro ma dịkwa mfe ịmepụta; ọ nwere ike na-etolite dị iche iche elu na agba, agba bụ gburugburu na edo.
Anọ. Uru ngwaahịa:
Ansheng nwere a zuru ezu ngwaahịa arụmọrụ ịme anwansị laabu, gụnyere agba film ekwedo ule, pensụl ekweghị ekwe ule, nnu ịgba ule, ntụ adhesion ule, ekwe ike ọgwụgwụ ule, mmanụ na-eguzogide ule, wdg Ọ na-bụ-eji maka epoxy resin ntụ ntụ na-abata ihe nnyocha, ngwaahịa Usoro nyocha usoro, na nnwale mmepe mmepe ọhụụ, ogo ngwaahịa nwere ike ịchịkwa.
N'otu oge ahụ, YKM nwere nnwere onwe abụọ mepụtara ụwa na-eduga n'ọkwa imepụta oke ọgwụgwọ. Ọ na-eji ikuku infrared na gas na-ekpo ọkụ ikuku ikuku. O nwere njirimara nke nnwere onwe ikpo ọkụ, ịdị n'otu, njikwa ngwa ngwa, nchekwa gburugburu ebe obibi, wdg, na ikike imepụta nwere ike iru 50,000 m2 / Mmepụta kwa afọ bụ ihe dị ka nde 15 m2 kwa ụbọchị. Ọ nwere ụlọ ọrụ na-ekpochapu gas na-ekpo ọkụ nke na-agbaso ụkpụrụ emission na afọ 10 sochirinụ, na-akwado ike nhazi post-dịka slitters, slicers, splicers, na 30 nnukwu ọsọ net net knitting machines.
1. Ọ na-eguzogide mmiri nmikpu na corrosion. Enwere ike ịnwale ya site n'ụdị dị iche iche nke mgbasa ozi mmanụ hydraulic gburugburu ụwa na okpomọkụ na oge dị iche iche, na mkpuchi mkpuchi enweghị mgbanwe. O kwesịrị ekwesị ka elu okpomọkụ na elu nsogbu pụrụ iche haịdrọlik nyo ngwaahịa.
2. Nguzogide ihu igwe, dika ASTM B117-09 nnu ​​nyocha ule, nyocha na-aga n'ihu nke 96H mkpuchi elu na-enweghị mgbanwe, nke kwesịrị ekwesị maka nzacha ikuku na gburugburu obi ọjọọ na gburugburu ebe obibi;
3. Strong adhesion, nwere ike ịgafe H ọkwa pensụl ule, 1kg / 50cm mmetụta ule, cross-ịkpụ ule, mgbochi ike ọgwụgwụ ule;
4. Nnukwu nguzogide na-ehulata, nwere ike apịaji site na mkpanaka igwe na radius nke curvature nke 1mm, na-enweghị mgbawa n'elu;
5. Mgbe emechara ngwaahịa ahụ, ọnụ nke waya na-enweghị nsọ ga-ada mgbe fim ahụ gbawara, na nrapado nke mkpuchi mkpuchi interweaving nwere ike iru 0.7kg.